ကဗျာဖြစ်ဖို့ ရင်ခုန်သံ ရှာစရာလိုပါသလား? ဂန္ထ၀င်မြောက်ဖို့ အရေးကြီးတာလား? အတ္ထုပတ္တိမှာ အရောင်ခါးတွေ မပါဖို့ အရေးကြီးတာလား? ခွဲခြားသိမြင်...
ချစ်သူဟာ တခါတလေ လမင်းကြီး ဖြစ်တယ် ချစ်သူဟာ တခါတလေ ချယ်ရီပန်းလေး ဖြစ်တယ် ချစ်သူဟာ တခါတလေ တောင်တန်းကြီး ဖြစ်တယ် တခါတလေ ပန်းပွင်...
ကိုကိုမောင်-ကိုဇော်-အလင်းစက်များ လူပျိုကြီးတွေပေါ့ တိုင်ပင်နေကျတာလေ မိန်းမယူဖို့ကိစ္စပဲဖြစ်မှာပါ ဆရာဦးဟန်ကြည်နှင့်ဇနီးချော candy လေးပေါ...
ကြှနျတျောဆကျမရေးခငျြတဲ့ လူတဈယောကျအကွောငျး - ကြှနျတျောတို့ကိုသယျလာတဲ့လယောဉျကွီး ကှာလာလမျပူလဆေိပျကို ဝဝေဲ့ကလြာတော့ ပတျပတျလညျမှာရှိတဲ့ဆီအုနျးပငျတှကေ လကျခုပျလကျဝါးတီးပွီး ကွိုဆိုနကွေတယျလို့ထငျမ...